Zvakadzidziswa naJesu Nezvemunyu uye Drakema | Waizviziva Here?
Jesu akataura zvisizvo here paakataura nezvemunyu usisavaviri?
MuMharidzo yake yepaGomo, Jesu akaudza vateveri vake kuti: “Imi muri munyu wenyika; asi kana munyu usisavaviri, kuvavira kwawo kuchadzorerwa sei? Hapana chinhu chauchashandisirwa kunze kwokuti urasirwe kunze, utsikwe-tsikwe nevanhu.” (Mateu 5:13) Munyu unoshandiswa kuita kuti zvinhu zvisaora. Saka zvinoita sokuti mufananidzo waJesu waireva kuti vadzidzi vake vaigona uye vaifanira kudzivirira vamwe kuti vasakanganiswa pakunamata uye patsika.
Munyu wemuGungwa Rakafa
Zvisinei, bhuku rinonzi The International Standard Bible Encyclopedia parinotaura nezvemashoko aJesu emunyu usisavaviri rinoti: “Munyu waiva muGungwa Rakafa wainge wakasangana nezvimwe zvinhu; saka pawainyorova wainyungudutswa wosara usisavaviri.” Saka zvinonzwisisika kuti Jesu akataura kuti munyu waisaririra wacho “hapana chinhu chauchashandisirwa kunze kwokuti urasirwe kunze.” Bhuku racho rinowedzera kuti: “Munyu waibva muGungwa Rakafa wainyanya kushandiswa muParestina nokuti zvaiva nyore kuti munhu autore pamahombekombe, kunyange zvazvo waiva wemhando yakaderera kana zvichienzaniswa newaibva mumakungwa mazhinji.”
Vateereri vaJesu vanofanira kunge vakafunga nezvei paakataura mufananidzo wokurasikirwa nedrakema?
Jesu akataura mufananidzo womukadzi akanga aine madrakema gumi ndokurasikirwa nedrakema rimwe chete, achibva abatidza rambi ndokutsvaira imba yake kusvikira ariwana. (Ruka 15:8-10) Panguva yakararama Jesu pasi pano, munhu aibhadharwa drakema kana ashanda zuva rose, saka kana munhu akarirasa ainge arasikirwa zvikuru. Kunyange zvakadaro, pane zvimwe zvikonzero zvinoratidza kuti zvakataurwa naJesu zvaiva zvinhu chaizvo zvaiitika muupenyu.
Mamwe mabhuku anotaura kuti vakadzi vaiwanzoshongedza mumba vachishandisa mari dzesimbi. Saka Jesu anofanira kunge aitaura nezvemari yainge yava nenguva yakareba chaizvo ichishandiswa kushongedza mumba mumhuri yemukadzi wacho kana kuti yaiva imwe yemari yaizopiwa murume aizomuroora. Chero zvazvingava, zvinonzwisisika kuti mukadzi uyu aizonetseka chaizvo kuti awane drakema rake rainge rarasika.
Uyewo, dzimba dzevanhu vakawanda panguva yaJesu dzaigadzirwa kuti dzisapinza chiedza uye kuti dzisanyanya kupisa. Dzakanga dziine mahwindo mashoma uye dzimwe dzakanga dzisitomborina. Kakawanda uriri hwainge huri hwemashanga kana kuti madzinde akaoma emiti yakasiyana-siyana. Saka kana munhu akadonhedza mari, zvaisava nyore kuti aiwane. “Saka kana chinhu chidiki chakaita semari yesimbi chaizodonhera panzvimbo yakadaro, kubatidza rambi uye kutsvaira imba yacho, ndiyo yaiva nzira yakanaka kupfuura dzose yokuti uiwane,” anodaro mumwe muongorori.
Waizviziva Here?—December 2012